Fikojakojana isan'andro an'ny palitao ambany
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-25
1, ny fanadiovana maina Ny palitao nidina dia azo diovina maina raha voalaza. Azo diovina maina izy io rehefa misy tasy lehibe ny palitao nidina, fa mila alefa any amin'ny mpanadio maina matihanina izy io mba hadio, mba hialana amin'ny fahasimbana amin'ilay palitao nateraky ny fomba fanadiovana maina tsy ambany sy ambany ...
Ny toetra mampiavaka ny palitao ambany an'ny vehivavy
Type A Type A profile profile dia hita amin'ny palitao sy palitao tsy misy andilana, na tsipika somary andilana ary somary malalaka. Izy io dia afaka manasongadina ny vatan'ny ambony na andilana manify, fa manarona ny kibonao ihany koa, mahatratra ny voka-dratsin'ny fihenan-tsakafo, manafina ny kileman'ny vatana. Ny drafitra ankapobeny dia tsotra a ...
Tombony namboarina arakaraka ny takian'ny mpanjifa: 1. Vidiny azo isafidianana: ny mpanjifa dia afaka manamboatra ny fomba amin'ny vidiny mifanentana arakaraka ny vondrona mpanjifany, mba hahafantarana tsara ny habaka ahazoana tombony. 2. Ny lamba tsy maintsy atao: ny fanao dia afaka misafidy malalaka ny lamba ampiasain'ny c ...